STILEEX SY OPENFLEX : Tolotr’asa maro mifanaraka amin’ny fari-pahaizanan’ny tanora
Sarotra tokoa ny fitadiavana asa amin’izao fotoana izao. Betsaka ireo nandranto fianarana kanefa tsy mety mahita izay mahasoa. 26 septembre 2018
Hany ka lasa mirona amin’ny asa izay tsy mety aminy sy tsy tafiditra ao anatin’ny lalam-pampianarana nodiaviny ny tanora. Noho izany dia tsy afaka mivelatra sy mivoatra. Mba iadiana amin’izany, manolotra tolotr’asa maro ny Openflex sy ny gazety amin’ny aterineto Stileex.
Asa mifanaraka amin’ny fari-pahaizana sy ny talentan’ny tsirairay, izay no tarigetra. Openflex, ilay rindrambaiko vita malagasy, tsotra sady mora ampiasaina ary mifanaraka amin’ny lalàna malagasy dia mikendry ny hamaha ny olan’ny tsy an’asa. Izy dia manana ny tanjona ny hanampy ny malagasy ary mba hampiova zavatra amin’ny alalan’ny fanabehazana sy ny asa amin’ny alalan’ny nomerika.
Ny rindrambaiko izay vokariny dia natokana ho an’ny orinasa kely sy salatsalany, kanefa tsy manakana ny orinasa lehibe ampiasa azy. Ohatra amin’izany ny resaka Vente&CRM sy ny Point de Vente izay tena mety amin’ny malagasy.
Ny gazetim-boky Stileex, izay mizara hevitra tsara kalitao sy voarindra dia maminavina ny hanampy ny olona an-davanan’andro. Raha toa ka liana amin’ny fanoratana, ny famakiana boky na ny fizarana vaovao amin’ny manodidina, dia ity no vahaolana. Betsaka ireo fikarohana ataon’ity farany toy ny toeram-piantsenana eto Madagasikara, ny asa ny sy fifamohivozana na ka ny fistidihina toeram-pisakafoanana. Marihina fa ity gazetim-boky ity dia mamoaka ihany koa ireo izay aingam-panahin’ny mpanorany.
Noho izany, raha liana amin’ny tontolon’ny informatika sy ny fanoratana dia afaka manantona na mitsidika ny tranokala. Ireo pejy Facebook ihany koa dia ahitana ireo karzana tolotr’asa izay mety hahasoa.